RASMI: Xidhiidhka Kubbada Cagta Yurub Ee UEFA Oo Soo Saaray Shaxda Kooxdii Ugu Fiicnayd Kulamadii Shanaad Ee Champions Leaque Iyo Xidigaha Shaxdan Nasiibka U Yeeshay. – WWW.Gool24.net
Xidhidhka kubbada cagta yurub ayaa maanta soo saarayay qiimaynta kulamadii shanaad ee horyaalka kooxaha yurub ee Champions Leaque iyada oo hore loogu dhawaaqay siddeedii xidig ee ugu bandhiga fiicnaa ee u tartamaya ciyaartoygii todobaadka ugu fiicnaa si la mid ah shanta ciyaartoy ee u sharaxan goolkii ugu quruxda badnaa kulamadii shanaad ee Champions Leaque, laakiin UEFA ayaa hadda soo saartay shaxda kooxdii ugu fiicnayd kulamadii UCL laga soo ciyaaray.
Todobaad kasta oo la ciyaaro kulamada Champions Leaque waxay UEFA soo saartaa shaxda ka kooban xidigaha boos kasta ugu badan dhiga fiican taas oo ku salaysan ciyaartoyda bandhiga ugu fiican sameeya ee dhibcaha ugu badan looga helo UEFA Champions League Fantasy.
Waxaa shaxda kooxda usbuuca ee Champions Leaque ugu fiican goolka ugu jira Ter Stegen oo kulankii Barcelona iyo Juventus door muuqda ku lahaa. Inkasta oo Ter Stegen aanu shaqo badan qaban maadaama oo ayna Juventus fursado badan helin, haddana waxa uu amaan wayn ku helay qaabkii cajiibka ahayd ee uu dhamaaadkii kulankan Dybala uga beeniyay gool cadaan ahaa.
Waxaa saddexda difaaca ah ku wada jira Nacho oo Real Madrid ka tirsan, Albiol oo Napoli u ciyaar iyo xidigii Manchester United guuldarada soo baday ee Lang oo ka tirsan kooxda FC Basel.
Halka khadka dhexe ay ku wada jiraan Marco Verratti oo kulankii PSG iyo Celtic qaab ciyaareed fiican ka muujiyay si la mid ah Tolisso oo Bayern Munich bandhig fiican ka sameeyay waxaana garabka midig ee khadka dhexe ku jira Eden Hazard oo sabab wayn ku lahaa guushii ay Chelsea ka soo gaadhay kooxda Qarabag iyada oo garabka bidix uu ku jiro saaxiibkiisa Chelsea ee Willian oo ay si cajiib ah u wada shaqeeyeen.
Saddex xidig ayaa noqday kuwa dhibcaha ugu badan looga helay UEFA Champions League Fantasy taas oo keentay in ay hogaamiyaan shaxda kooxda todobaadka ee Champions Leaque ugu fiican waxayna kala yihiin Cristiano Ronaldo, Neymar jr iyo Roberto Firmino oo min laba gool ka soo dhaliyay kulamadii laga soo ciyaaray Champions Leaque waxaana mid kasta lagu helay 13 dhibcood.
Halkan Kaga Bogo Shaxda Kooxda Ugu Fiican Champions Leaque: